ချီးမွမ်းပြောဆိုနည်း (How to payacompliment) - Myanmar Network
HomeYouInboxProfile InfoPrivacy SettingsEmail SettingsConnectionsMembersInvite MoreForumAddaDiscussionMy DiscussionsPhotosAdd PhotosView All PhotosVideosAdd Videosအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာများContactChatPhotos
ချီးမွမ်းပြောဆိုနည်း (How to payacompliment)
Added by Saw Hosea on September 30, 2009 at 12:31
နည်းလမ်းတကျ ချီးမွမ်းပြောဆိုတတ်ဖို့ လေ့လာထားပါ။
Man: Good morning! အမျိုးသား - နှုတ်ဆက်စကား Woman: Morning! အမျိုးသမီး - တုံ့ပြန်နှုတ်ဆက်
Man: By the way, I just wanted to say well done on clinching that deal! အမျိုးသား - စကားမစပ် ပြောရဦးမယ်။ အဲဒီသဘောတူညီချက်ရအောင်လုပ်လိုက်တာ သိပ်ကောင်းတာဘဲ။ Woman: Oh, thanks. It wasn’t too difficult. အမျိုးသမီး - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ သိပ်မခက်ပါဘူး။
Man: You’re being modest! You did really well. အမျိုးသား - ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချပြောတာပါ။ တကယ်တော့ အင်မတန် တော်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ Woman: Thank you. အမျိုးသမီး - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Man: You’reagreat manager, you know. အမျိုးသား - ခင်ဗျားက အင်မတန်တော်တဲ့ မန်နေဂျာဘဲ သိတယ်မဟုတ်လား။ Woman: Do you think so? အမျိုးသမီး - အဲဒီလိုဘဲ ထင်သလား။
Man: Oh yeah. အမျိုးသား - ထင်ပါတယ်။ Woman: I appreciate that. (Pause) အမျိုးသမီး - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Man: Have you cut your hair? အမျိုးသား - ဆံပင်ညှပ်ထားလား။ Woman: Oh yes, I did actually. Thanks for noticing! အမျိုးသမီး - ဟုတ်တယ်။ ညှပ်လိုက်တယ်။ သတိပြုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Man: Where did you get it done? အမျိုးသား - ဘယ်မှာညှပ်တာလဲ။ Woman: Oh, just thatplace on the high street. အမျိုးသမီး - လမ်းမတန်းက ဆိုင်မှာပါ။
Man: They didagreat job and it looks great with the out fit. အမျိုးသား - ဆံပင်ညှပ်တဲ့သူတွေ တကယ်တော်တာဘဲ၊ အ၀တ်အစားနဲ့လည်း သိပ်လိုက်တယ်။ Woman: Do you think so? အမျိုးသမီး - အဲဒီလိုဘဲ ထင်သလား။
Man: Oh yeah. Very …fashionable. အမျိုးသား - ထင်ပါတယ်၊ သိပ် ဖက်ရှင်ကျတာဘဲ။ Woman: Oh, it’s just an old thing. အမျိုးသမီး - ပုံဟောင်းနေပါပြီ။
Man: Well, you’ve gotagreat sense of style. အမျိုးသား - ခင်ဗျား စတိုင် သိပ်ကောင်းတာဘဲ။ Woman: Thank you, youtoo. အမျိုးသမီး - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရှင်လည်း ဒီလိုပါဘဲ။
Man: Thank you. (pause) အမျိုးသား - ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ (ခေတ္တငြိမ်သက်)
Man: Nice perfume, too.Is that Dream? အမျိုးသား - ရေမွှေးလည်းကောင်းတယ်နော်။ Dream ရေမွှေးလား။ Woman: Well, yes it is,actually. အမျိုးသမီး - ဟုတ်တယ်။
Man: You wear it well. အမျိုးသား - ခင်ဗျားနဲ့ လိုက်တယ်။ Woman: I’m flattered. အမျိုးသမီး - သိပ်မြှောက်တာဘဲ။
အမျိုးသား - တကယ်ပြောတာပါ။
Woman: Listen, do you want something? အမျိုးသမီး - နေပါဦး။ ရှင်တစ်ခုခု လိုချင်တာရှိလို့လား။ Man: No. I’m just being polite, you know. အမျိုးသား - မရှိပါဘူး။ စကားကို ယဉ်ကျေးအောင် ပြောတာလေ။
အမျိုးသမီး - သြော်။
Go to http://learnenglish.britishcouncil.org/en/how/how-pay-compliment for vocabulary and comprehension tasks and other videos.
Like 106 members like this
IELTS Speaking: Improve English & prepare for IEL…
IELTS: Improve English & prepare for IELTS Speaki…
05:30 AddaComment
Comment by Myint Myint Than on May 31, 2013 at 11:17 Thanks Comment by Han Min Aung on May 31, 2013 at 8:38 Thanks Comment by lmoethu on May 29, 2013 at 10:54 Thanks Comment by Jack Kyaw Myint on May 23, 2013 at 19:35 thank you indeed. Comment by Myint Myint Than on May 23, 2013 at 15:58 Thanks Comment by Kyaw Ba Din on May 10, 2013 at 23:32 Thanks so much. Let me share this video on my blog. Comment by Byakparling on May 4, 2013 at 8:16 i like this..,but i cannot clearly hear..... Comment by Khin Sandar Lay on April 27, 2013 at 20:09 Very Nice . Thanks . Comment by Zaw Linn Maung on March 25, 2013 at 15:28 Very Good . Comment by kyawnaingphyo on March 17, 2013 at 17:00 I like this
ဇွန်လ အတွက် ၁၀၀၀၀ တန် ဖုန်းငွေဖြည့်ကဒ် ၁၀ ကဒ် ကံစမ်းမဲ အစီအစဉ် စနေပြီ ဖြစ်ပါသည်။
အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအသစ်များ - New English Lessons on Our Websites (19 June 2013)
ဗြိတိသျှကောင်စီ မြန်မာ၊ ရန်ကုန်ရုပ်ရှင်ကျောင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးတို့ ပူးပေါင်းလျက် ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခြင်း သင်တန်း ဖွင့်လှစ်မည်
အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာအသစ်များ - New English Lessons on Our Websites (17 June 2013)
Interactive flip Education UK brochures
IELTS Writing: Task response/Task achievement Added by Myanmar Network6Comments
IELTS Speaking: Improve English & prepare for IELTS - Vocabulary Added by Myanmar Network 10 Comments
IELTS: Improve English & prepare for IELTS Speaking: Fluency & Coherence Added by Myanmar Network4Comments
© 2013 Created by Myanmar Network. Badges | Report an Issue | Terms of Service
This site is best viewed with Firefox and you will need to download and install Zawgyi One font to see Myanmar characters.
© Copyright Myanmar Network
Do not want to receive emails from Myanmar Network?
To stop receiving all emails from Myanmar Network, go to http://www.myanmar-network.net/profiles/profile/emailSettings and tick the box "I don't want to receive emails from Myanmar Network".
That will stop all emails from Myanmar Network.